शिवरात्रीको पूर्वसन्ध्यामा सोमबार राती पशुपतिको प्रवेशद्वार गौशालामा देखिएको दृश्य (भिडियो), Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
शिवरात्रीको पूर्वसन्ध्यामा सोमबार राती पशुपतिको प्रवेशद्वार गौशालामा देखिएको दृश्य (भिडियो)
काठमाडौं। मंगलबार पशुपतिमा भव्य रुपमा शिवरात्री मनाउने तयारी भइरहेको थियो । यसका लागि केही दिन अघिदेखि नै जोडतोडका साथ तयारी भइरहेको थियो । शिवरात्रीको अघिल्लो रात पशुपतिको प्रवेशद्वार गौशाला पुग्दा यहाँ सवारी व्यवस्थापनमा ट्राफिक प्रहरीहरु निकै सक्रिय थिए ।
पशुपतिमा शिवरात्रीको दिन मध्यरातदेखि नै दर्शनार्थी आउने गरेको विगतलाई ध्यानमा राख्दै यसपटक पनि त्यस्तै भिडभाड हुने अनुमान ट्राफिक प्रहरीले गरेका थिए । सामान्य अवस्थामै ट्राफिक जाम भइरहने गौशाला र चाबहिल क्षेत्रमा शिवरात्रीको अवसरमा हुने भीड थेग्नु निकै मुस्किल हुने तय थियो । त्यसमाथि सोमबार राती उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन पशुपति दर्शनका लागि आउने भएकोले सवारी व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण थियो । सवारी व्यवस्थापनका लागि ट्राफिक प्रहरीको सक्रियता उल्लेख्य थियो ।
भिडियोमा हेर्नुहोस् सवारी व्यवस्थापनमा सक्रिय ट्राफिक प्रहरीहरु